Dacwadaha faraxumeeynta oo weli heer sare taagan - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dacwadaha faraxumeeynta oo weli heer sare taagan
La daabacay torsdag 14 januari 2016 kl 13.54
Foto: CartoDB och Nick Näslund/Sveriges Radio
Tirodii dacwooyin ee la xidhiidha faraxumeyn amba sexuellt ofredande ayaa ilaa sannadka 2013 taagneeyd heer sare.Hasayeeshe aaney wax iska bedelin tiradii qof ee faldembiyeeedkan lugu xukumay tobankii sanno ee ugu dambeeysay.
Sidaas waxa sheegay baadhitaan ay heeyadaha ka hor tagata dembiyada ee BRÅ.
L´aanta Ekot ayaa baadhay tiradii dacwooyin ee soo gaadhay booliska intii u dhaxeeysay bisha jannaio iyo nofeembar sannadkii hore.
Halkaas ayaa laga arkay in ay tiradii qof e dacwad faraxumeeyn ah booliska u gudbisa weli heerki sare ay taagnayd 2013, wax iska bedeli doonin marka ay BRÅ salaasada dambe shaacin doonto tirokoobka 2015.
Tirokoobkaas ayaa laga filaya in 7600 jeer dacwad laga gudbiyay faraxumeeyn.
Dhanka kale 2014 ayuu fal dambiyeedkani ahaa mid aad u sareeya. Waagaas ayaa 9000 jeer booliska ashkato laga gudbiyay.
In la ashkateeyo dambiyada nocan oo kale ah ayaa ah arrin soo korodhay 15 sanno ee ugu dambeeyay.
Felipe Estrada oo ku takhasuusay cilmiga kriminologi ayaa u jeeda in sababta ay ashkatooyinkani u soo kordheen xidhiidh la leedahay in u dadweynahu faraxumeeynta sanadyadii ugu dambeey u arkaan faldembiyadeed dhab ah, in kasta oo ay jiraan dad faro badan oo marka arrinkan loo geeysto booliska dacwad ka gudbin, ayuu sheegay.
Boqolkii ba 90 dadka dacwada ka gudbiya fal dembiyeedkan ayaa ah gabdho.
Fal dambiyeedkan ayaa 400 oo jeer sannad walba go´aan maxkamadeed ku dhaca. Waa sida u tirokoobka BRÅ sheegayo.
-Waa in faldambiyeedkan booliska loo gudbiyo, si boolisku u ogaado , uguna muuqdo tirokoobka. Anagana aqoon ayey nugu soo kordhinaysa, ayuu hadalka ku soo gabagabeeyay, Felipe Estrada.